१-पत्रुस कि चट्टान? – Word of Truth, Nepal
पत्रुस कि चट्टान?
मत्ती १६:१८ एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पद हो। तर यो ज्यादै गलत तरिकाले बुझिएको र गलत तरिकाले अर्थ लगाइएको पद पनि हो। यस पदमा प्रभुले भन्नुभएको खास कुरा यो थियो: “अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी ______________ हौ, र यस _____________माथि म _________ ______________ बनाउनेछु, अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुनेछैनन्” (मत्ती १६:१८)।
यी शब्दहरूलाई हामीले कुन अर्थमा बुझ्नुपर्छ? के येशूले पत्रुसको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? अनि येशूले मण्डलीको बारेमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अनि येशूले आफ्‍नो बारेमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अनि “चट्टान” भनेको को हो? चाबी प्रश्न यही हो।
यस पदभित्र केही सुस्पष्ट र महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू छन्। मत्ती १६:१८ अनुसार, मण्डलीका निर्माता को हुनुहुन्छ? “म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु”: यो भन्ने को हुनुहुन्छ? ___________________ कहिल्यै बिर्सन नहुने एउटा सत्यता यही हो। येशू ख्रीष्ट नै मण्डलीका महान् निर्माता हुनुहुन्छ। मण्डली उहाँद्वारा निर्माण गरिएको हो। मण्डली कुनै मानिसद्वारा निर्माण गरिएको होइन, यो त परमप्रभुद्वारा निर्माण गरिएको हो! मत्ती १६:१८ अनुसार, यो मण्डली कसको हो? येशूले भन्नुभयो, “म _________ मण्डली बनाउनेछु।” के कुनै पास्टरले घमण्ड गर्दै “यो मेरो मण्डली हो!” भन्नु सही हो? एल्डर वा डिकनले त्यसो भन्नु सही हो? मण्डली येशू ख्रीष्टको हो। यो उहाँको मण्डली हो! मानिसहरूले अक्सर “त्यो मेरो मण्डली हो,” भन्ने गर्छन् तर वास्तवमा मण्डली उहाँको हो भनेर हामीलाई सधैं सम्झाइनुपर्छ।
यो चट्टान को हो? क्याथोलिक मण्डलीको अडान यस्तो छ: यो चट्टान पत्रुस हो। जुन बलियो चट्टानमाथि मण्डली बनाइएको छ त्यो चट्टान पत्रुस नै हो भनी उनीहरू विश्वास गर्दछन्। येशू ख्रीष्टको मण्डली पत्रुसमाथि बसालिएको हो भनी उनीहरू विश्वास गर्दछन्। ख्रीष्ट निर्माता हुनुहुन्छ, मण्डली ख्रीष्टको हो, तर पत्रुसचाहिँ मण्डलीका जग हुन्। यो पदलाई उनीहरूले यसरी बुझ्ने गर्छन्: “तिमी पत्रुस हौ, र यस चट्टान (पत्रुस) माथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु” (मत्ती १६:१८)।
ख्रीष्टले पत्रुसलाई प्रथम पोपको रूपमा नियुक्त गर्नु भएको हो भनेर क्याथोलिक मण्डलीले विश्वास गर्छ। येशू ख्रीष्टका शब्दहरूलाई उनीहरू यसरी बुझ्छन्: “पत्रुस, म मेरो मण्डली तिमीमाथि बनाउनेछु। तिमी नै पहिलो पोप हुनेछौ र तिमी नै मण्डलीको दृश्यमान शिर हुनेछौ।”
आज हाम्रो संसारमा एकजना विशिष्ट र प्रभावशाली मानिस छन् जसलाई “पोप” भनिन्छ। खबरहरूमा अक्सर तिनको उल्लेख गरिन्छ र तिनलाई देखाइन्छ। समय-समयमा तिनले देश-विदेश भ्रमण गर्दछन्। ख्रीष्टमस, इस्टर र वर्षभरीका अन्य विभिन्न समयहरूमा आयोजना गरिएका धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई तिनले नै सञ्चालन गरिरहेको देख्न सकिन्छ। जहीँ-तहीँका क्याथोलिक मानिसहरूले तिनलाई आफ्नो अगुवा र शिरको रूपमा हेर्ने गर्छन्। पोपको बारेमा तपाईंलाई कत्तिको ज्ञान छ? तिनी को हुन् र तिनका अधिकारहरू के-कस्ता छन्? उनको बारेमा क्याथोलिक मानिसहरूले के विश्वास गर्छन्?
“पोप भनेको सन्त पत्रुसको वैधानिक उत्तराधिकारी र मण्डलीका दृश्यमान शिरको रूपमा यस पृथ्वीमा ख्रीष्टका प्रतिनिधि हुन्। जसरी मानव शरीरमा एउटा शिर हुन्छ, ठीक त्यसरी नै मण्डलीको एउटै शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। पोपचाहिँ यस पृथ्वीमा उहाँको प्रतिस्थापक (Vicar, कसैको विकल्पमा काम गर्ने व्यक्ति), वा प्रतिनिधि, वा मण्डलीका दृश्यमान शिर हुन्।” (बाल्टिमोर क्याटेकिज्म, Baltimore Catechism)।
क्याथोलिक मण्डलीले विश्वास गर्दछ कि पत्रुस “ख्रीष्टले स्थापना गर्नुभएको मण्डलीको शिर, वा पहिलो पोप हुनका निम्ती उहाँद्वारा चुनिएका प्रेरित” हुन् (बाल्टिमोर क्याटेकिज्म)। मत्ती १६:१८ मा येशूले पत्रुससँग बोल्दाहुँदी उहाँले पत्रुसलाई प्रथम पोप, उहाँको प्रतिनिधित्व गर्नेवाला र संसारमा मण्डलीको दृश्यमान शिरको रूपमा उहाँको स्थान लिने व्यक्तिको रूपमा नियुक्त वा अभिषेक गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
“समस्त मण्डलीको प्रधान शिक्षक र शासक हुने विशेष अधिकार सन्त पत्रुस एक्लैले अभ्यास गरून् भन्ने आशय ख्रीष्टको थिएन, तर यो अधिकार तिनको उत्तराधिकारी, अर्थात् पोप वा रोमको अध्यक्षहरूमा सर्दै जाओस् भन्ने आशय थियो, जोचाहिँ संसारमा ख्रीष्टको सहायक पादरी र मण्डलीको दृश्यमान शिर हुन् (बाल्टिमोर क्याटेकिज्म, Baltimore Catechism)।
“के पत्रुसको अधिकार उहाँको मृत्युपश्चात् अन्त भयो? भएन, यो त उहाँको मृत्युपछि (ई. सं. ७८) लिनस् नामक मानिसलाई सुम्पिइयो, त्यसपछि क्लेटसलाई (९० ई. सं.), र त्यसपछि क्लेमेन्टलाई (१०० ई.सं.), र त्यसपछि अर्कोलाई अनि त्यही क्रममा अर्कोलाई गर्दै करिब २००० वर्षदेखि यसरी हस्तान्तरण हुँदै आएको छ।” — विलियम जे. कोगनद्वारा लिखित अ ब्रीफ क्याटेकिज्म फर एडल्ट्स, पृ. ६० (William J Cogan, A Brief Catechism For Adults)।
“पोप” भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको पापा (papa) भन्ने शब्दबाट आउँछ, जसको अर्थ “पिता” हुन्छ। कुनै एउटा मान्छेलाई सम्बोधन गर्दा यो शब्द प्रयोग गर्ने बारेमा प्रभु येशूले के भन्नुभयो (हेर्नुहोस मत्ती २३:९)? ______________________________________ ______________________________________
कहिलेकाहीँ पोपलाई “पवित्र पिता” भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। के एक क्षणभङ्गुर मानिसलाई यस्तो उपमाद्वारा सम्बोधन गर्नु ठीक हुन्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ (यूहन्ना १७:११ सित तुलना गर्नुहोस्)? _________________
कहिलेकाहीँ समाचारहरूमा वा अन्य ठाउँहरूमा पोपलाई “पोन्टिफ” (PONTIFF) भनेर सम्बोधन गरिएको तपाईंले सुन्न सक्नुहुन्छ। यो शब्दको शाब्दिक माने हो “पूल निर्माता”। पूल कुनै दुई स्थानहरूको बीचमा खडा हुन्छ र तपाईंलाई एक ठाउँबाट अर्कोमा जानको निम्ति मद्दत गर्छ। पोपले आफू परमेश्वर र मानिस बीचको पूल वा मध्यस्थ भएको दाबी गर्दछ। बाइबल अनुसार, परमेश्वर र मानिसको बीचमा एउटै मध्यस्थ को हुनुहुन्छ (१ तिमोथी २:५)? __________________________
“क्याथोलिक चर्च अमोघ छ भन्नुको अर्थ यो हो, कि पवित्र आत्माको विशेष सहयोगद्वारा मण्डलीले विश्वास वा नीतिशास्त्रहरूको शिक्षा सिकाउँदा वा विश्वास गर्दा उसले कुनै गल्ती गर्न सक्दैन। अमोघत्वको माने पोपले पाप गर्नै सक्दैन भन्नेचाहिँ होइन, तर विश्वास वा नीतिशास्त्रहरूको शिक्षा सिकाउने सवालमा, भूल गर्नबाट तिनी पवित्र आत्माद्वारा जोगाइँदछन् भन्ने हो। मण्डलीले केवल सत्यता मात्र सिकाउँछ। सबै ख्रीष्टियनहरूको शिक्षक पोपद्वारा मात्र मण्डलीले विश्वास वा नीतिशास्त्रहरूको शिक्षा सबै विश्वासयोग्यहरूले पक्रिराखुन् भनेर अचूक तरिकाले व्याख्या गर्दछ” (बाल्टिमोर क्याटेकिज्म, Baltimore Catechism)।
“पोपको अमोघत्व भन्नुको अर्थ यो हो, कि पोपले सम्पूर्ण मण्डलीको शिरको रूपमा विश्वास वा नीतिशास्त्रहरू बारेमा बोल्दाहुँदि, गलत कुरा सिकाउनै सक्दैनन्। अमोघत्व र पापहीनता (जसको अर्थ एउटा मानिसले पाप गर्न सक्दैन भन्ने हुन्छ) को बीचमा अलमल हुनुहुँदैन” — विलियम जे. कोगनद्वारा लिखित् अ ब्रीफ क्याटेकिज्म फर एडल्ट्स, पृ. ६१(William J Cogan, A Brief Catechism For Adults)।
पोपको अमोघत्वको सिद्धान्त एउटा “नयाँ” सिद्धान्त हो। यसलाई रोममा सन् १८७० मा भ्याटिकन काउन्सील जुटेर परिभाषित गरेको थियो। उनीहरूको परिभाषा यस्तो छ:
“…हामी यो सिकाउँछौं र परिभाषित गर्छौं कि यो ईश्वरीय तवरले प्रकट गरिएको आधिकारिक सिद्धान्त हो कि रोमन पोन्टिफ, जब उहाँ एक्स-क्याथिड्रा (ex-cathedra) रूपमा बोल्नुहुन्छ, भन्नुको तात्पर्य, जब उहाँ सबै ख्रीष्टियनहरूका पास्टर र शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने कामको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, उहाँको सर्वोच्च प्रेरितीय अधिकारको हैसियतले जब उहाँले विश्वास र नैतिकताको सम्बन्धमा कुनै सिद्धान्तलाई परिभाषित गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर उहाँ धन्य पत्रुसको स्थानमा उहाँलाई प्रतिज्ञा गरिएको ईश्वरीय सहायताद्वारा, उहाँको साथमा त्यो अमोघत्व हुने गर्छ जसद्वारा आफ्‍नो मण्डली आभूषित होस् भनेर ईश्वरीय उदारकर्ताले इच्छा गर्नुभयो यस हेतुले कि उसले विश्वास र नैतिकताको सम्बन्धमा रहेका सिद्धान्तहरूको प्रतिरक्षा गर्न सकोस्, र त्यसैकारण रोमन पोन्टिफका ती परिभाषाहरू, मण्डलीको समर्थनको आधारमा नभएर, आफैमा सुधारको घेरा भन्दा बाहिर छन्।”
घोषणा गरिएका अभिव्यक्तिहरू “विश्वास र नीतिशास्त्रहरू” सँग सम्बन्ध राख्‍ने मात्र हुनुपर्छ। विश्वास भनेको मण्डलीले गर्ने विश्वाससँग सरोकार राख्‍ने कुरा हो र नीतिशास्त्रहरू भनेको मण्डलीले गर्ने व्यवहारसँग सरोकार राख्‍ने कुरा हो।
क्याथोलिक मण्डलीले आफूलाई अचूक ठान्दछ र आफूसँग नियमहरू बनाउने र बदल्ने अधिकार छ भनेर पनि विश्वास गर्दछ: “मण्डलीसँग नियमहरू बनाउने र बनाइएका नियमहरू बदल्ने परमेश्वरबाटको अधिकार छ। नियमहरू बनाउने यो अधिकार प्रेरितहरूका उत्तराधिकारीहरू, अर्थात् विशपहरूद्वारा अभ्यास गरिन्छ, र विशेषगरी, प्रेरितहरूका प्रमुख, अर्थात् सन्त पत्रुसको उत्तराधिकारी पोपको हातमा विश्वव्यापी मण्डलीका निम्ति नियमहरू बनाउने अधिकार हुन्छ” (बाल्टिमोर क्याटेकिज्म)।
सबै विश्वासीहरू यस महान् भवन अर्थात् मण्डलीको अंश हुन् भनी पत्रुसले ५ पदमा मानिलिएका छन्। मण्डली भनेको “आत्मिक घर” हो जुनचाहिँ ईंट्टाहरू वा काठहरू वा सिमेन्टले होइन, तर “जिउँदो पत्थरहरू” (विश्वासीहरू) ले बनेको हुन्छ। हरेक विश्वासी यस महान् भवन, अर्थात् मण्डलीमा एउटा जिउँदो पत्थर हो। के तपाईं यस भवनको अंश हुनुहुन्छ? के पत्रुस यस भवनको एउटा अंश थिए? के पत्रुस आफैं नै कुनाढुङ्गा थिए (६-७ पदहरू तुलना गर्नुहोस्)? ________________
१ पत्रुस २:४-७ को आधारमा “ठीक” वा “बेठीक” लेखेर जवाफ दिनुहोस्:
१ कोरिन्थी ३:११ अनुसार मण्डलीका एउटै मात्र जग को हुनुहुन्छ? ________________________ अङ्ग्रेजीको एउटा भजनले यस्तो भन्दछ, “मण्डलीको एउटै जग येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ।” उक्त भजनले यस्तो भन्दैन, “मण्डलीको एउटै जग पत्रुस हुन्।” मण्डली पत्रुसमाथि होइन, तर ख्रीष्टको र उहाँको वचनको चट्टानसरह बलियो जगमाथि बनाइएको छ।
(टिप्पणी: पोपहरूले त्यस्तो श्रद्धा स्वीकार गर्ने मात्र होइन माग नै गर्छन्। यहाँसम्म कि निकै उच्च ओहोदाका पादरीहरूले समेत, नव नियुक्त पोपको सामु भुईंमा लम्पसार परेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछन्, वा अभिषेक गरेपछि तिनको सामु शपथ खाएर तिनको खुट्टालाई चुम्बन गर्दछन्। पोपहरूले “पवित्र पिता” को उपाधि आफूले अधिकारमै पाएझैं गरी स्वीकार पनि गर्छन्। के कहिल्यै पत्रुसलाई “पवित्र पिता” भनेर बोलाइएको थियो र?)
मत्ती १६:१८ एक प्रकारको श्‍लेषोक्ति हो। यहाँ दुईओटा उस्तै-उस्तै शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ। येशूले भन्नुभयो, “तिमी पत्रुस (ग्रीक शब्द पेट्रोस् हो) हौ, र यस चट्टानमाथि (ग्रीक शब्द पेट्रा हो) म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु।” अर्को शब्दमा, उहाँ यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “तिमी पेट्रोस् हौ र यस पेट्रामाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु।”
एउटै नेपाली शब्दले “पेट्रोस” लाई व्याख्या गर्ने हो भने त्यो शब्द “पत्थर” हो। हेर्नुहोस यूहन्ना १:४२ (पत्रुस=केफास=पत्थर)। चट्टानको एक टुक्रालाई पत्थर भनिन्छ। तसर्थ सामान्यतया यो शब्दले कुनै खुकुलो पत्थर वा हल्लाउन सकिने पत्थरलाई जनाउँछ, जसलाई एउटा मानिसले अन्यत्र फ्याँक्‍न पनि सक्छ। यो शब्दले कहिलेकसो अति ठूलो पत्थरलाई जनाउन पनि सक्छ, तर प्राय: जसो यस शब्दले सानो, हल्लाउन सकिने पत्थरलाई जनाउँछ। यो शब्द लाइटरमा प्रयोग गरिने पत्थर र घुयेंत्रोमा प्रयोग गरिने ढुङ्गाहरू जनाउन पनि प्रयोग गरिएको छ। यो शब्दलाई व्यक्ति वा वस्तुको नामको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ (पत्रुस)। के पत्रुसले आफूलाई पत्थरको रूपमा हेरे (१ पत्रुस २:५)? ____________ के एउटा खुकुलो पत्थरमाथि मण्डली बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ? के एउटा भवन स-साना ढुङ्गाहरूमाथि बसालिनु सम्भव छ? के यो एउटा बलियो जग हुन सक्ला?
एउटै नेपाली शब्दले “पेट्रा” लाई व्याख्या गर्ने हो भने त्यो शब्द “चट्टान” हो। (मत्ती १६:१८—“यस चट्टानमाथि”)। कुनचाहिँ ठूलो हुन्छ, चट्टान कि पत्थर? __________ पेट्रा शब्दको अर्थ हो ठूलो चट्टान वा पहरा सरह चट्टान। प्राय: जसो यो शब्दलाई कुनै अचल, स्थायी चट्टान वा हल्लाउन नसकिने चट्टानलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ। प्राय: जसो यो शब्दलाई समुद्रछेऊको चट्टानी भीरलाई (चट्टान, पहरा) जनाउन प्रयोग गरिएको छ। मण्डली एउटा विशाल, ठोस्, अचल र स्थायी चट्टानमाथि बनाइएको छ! यो जग यति ठोस र यति सुरक्षित छ कि “नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुनेछैनन्” (मत्ती १६:१८)।
“यस हप्ता म एउटा चर्चघरको सामु उभिएको थिएँ जो एक समय समुद्री किनाराबाट निकै पर अवस्थित थियो, तर अहिले यो समुद्रको छेवैमा खडा रहेको छ। प्राय: हरेक वर्ष विशाल मात्रामा माटोको भीर समुद्रमा खस्छ, र एक वा दुई वर्षमा यो मण्डली पनि खस्‍नैपर्छ। अहिले त यो निश्चिन्त र शान्त भएर उभिरहेको छ, तर कुनै निश्चित दिनमा यो समुद्रभित्र निलिनेछ। म यो सोच्न बाध्य भएको छु, कि उक्त भवनले केही निश्चित प्रकारका कथित मण्डलीहरूलाई जनाउँछ, जोहरू कुनै शासनप्रथा वा अन्धविश्वासको माटेभीरमाथि उभिएका छन्। मानिसहरूले पाएको प्रकाशको छाल र त्योभन्दा पनि, परमेश्वरको आत्माको समुद्री छाल आउँदैछ र तिनीहरूका जगहरूलाई क्लान्त पार्दैछ र अन्त्यमा एकदिन त्यसको पूर्ण संरचना भत्कनैपर्छ। त्यसपछि के? के हामी यसो भन्दै कराऔं, “परमेश्वरको मण्डली भत्कियो?” यस्तो मूर्ख उच्चारण टाढै रहोस्; परमेश्वरको मण्डली अति सुरक्षित छ। यसो नजर लगाउनुहोस्, त्यहाँ परमेश्वरको मण्डली आँधीबेह्रीले पूर्ण अन्तरीप (समुद्रमा देखिने अग्लो चट्टान) माथि खडा रहिरहेको छ, जहाँ समुद्र अटुट रूपमा उर्लेर आउँछ र हरेक छेऊबाट सँधै धक्का दिन्छ। तरैपनि त्यसले कुनै क्षतिको डर मान्दैन, किनभने त्यो कुनै माटेभीरमा बनाइएको छैन, तर चट्टानमाथि बनाइएको छ जसमाथि नरकका छालहरू विजयी हुनेछैनन्। जीवित परमेश्वरको मण्डली खडा रहनेछ (मत्ती १६:१८)।”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 20:21:542020-06-13 09:51:33१-पत्रुस कि चट्टान?